Qorshaha Tokyo - waa isbedel joogto ah
Daboolka guriga Madadaalo
Magaalooyinka waaweyn, gaar ahaan caasimadda, aad ayay u yaryihiin. Waxay u maleynayaan in ay ku jiraan meel degdeg ah, ha u haysan waqti aad ku nooshahay meelna aad ku nooshahay, ama aad u sii wanaagsanaato maalinta ka dambeysa berrito. Caasimadda Japan, Tokyo, marka ugu horeysa ee la eego maaha mid ka baxsan. Halkan waa qeylo, dad badan, adag oo aan la fahmi karin. Tokyo waxay labadaba noqon kartaa mid xiiso badan iyo murugo. Way fududahay in aad jacayl la jarto, laakiin waa sida fudud in la niyad jabo. Kani waa meeraha oo dhan. Xaafadda Tokyo waa magaalo isbedel joogto ah. Magaalo wakhti aan waligeed weli taaganeyn, oo waxay u muuqataa in aysan jirin hal daqiiqo nabad ah dadka deggan ...
Ma jiro hal daqiiqo oo nasasho iyo dalxiisayaal, markii ugu horeysay ee la ogaado Japan. Inta badan waa inaad aragto oo sameysaa! Booqo dhismayaasha dhaadheer, ku soo dhawow Palace Imperial, waxay u fuulaan kan ugu sarreeya ee Tower TV-ga, waxay ku socdaan meelo ka baxsan goobaha Shibuya, Haradziuk iyo Shinjuku ... Arag indhahaaga u eeg qaybta raaxada iyo qaybta wax iibsiga ee Ginza iyo suuqa caanka ee Tsukiji. Ku raaxayso waxqabadka Masraxa Kabuki iyo tareenka monorail-ka oo aan lahayn makaanigga jasiiradda "qurxinta" ee quraacda ee Odaiba. Raadi noloshii habeenkii Roppongi oo sahamiso dhismaha weyn ee Roppongi Hills, halkaas oo laga soo galo dabaqa 58aad ee magaalada Mori waxaad arki kartaa magaalada oo dhan on palmka, iyo cimilada cad oo aad xitaa isku dayi kartaa inaad aragto Fuji ... Laakiin ugu muhiimsan, ee caasimada Japan, laga bilaabo wadooyinka dalxiis ee caadiga ah, illowday oo ku saabsan tilmaan si aad u hesho waxyaabaha ka soo horjeeda jidadka iyo weriyeyaasha Tokyo. Dhammaan, Tokyo waa magaalo ur ah, calaamado, ururo iyo daqiiqado. Waqtiyada kala duwan ee sanadka waxay u egyihiin, dareemaan oo uriyaan si kala duwan. Guga waa arin aad u jilicsan oo ubaxyo ah oo ubaxyo ah iyo urta afuufta ee bento, casho quraac ah oo Japanese ah oo sanduuq ah, shaqaalaha hawada kulul waxay si toos ah u dhadhanayaan jidka, dabeecadda dabeecadda ama daawashada waxa soo socdo. Xilliga xagaaga - ariillada khamriga ah ee dhacdooyinka lafdhabarta ee Japan, suufka macaan iyo cagaarka buskudka ah, kuwaas oo lagu iibiyo wadooyinka inta lagu jiro xilliyada ciidaha badan. Dayrtu waxay u ekaataa sida tufaaxa iyo qiiqa lafdhabarta gubanaya ee macbudka, iyo hawada qaboobaha qoyan waxaa ka jira urka badda, shiil kalluun la shiisho oo laga sameeyo soodhadhka soyinta iyo baradho macaan oo la shiilay oo lagu shiilayo iibiyaasha waddooyinka.
Tokyo, waxaad u baahan tahay inaad ku socotid waxyaabo badan oo aad ku fariisato kursiga keydka ee qaar ka mid ah jardiinooyinka aan la garaneynin, adigoo ku riyoodaya qaansiyada. Ama cab cabitaan kaafi ah oo kafateeriyada qurxinta leh oo dadka sugaya ay marti-galiyaan marti-ku-marti-ku-sameysyo leh "irisian mass" waxayna si joogto ah kuugu shubi doonaan hal galaas oo biyo ah, xitaa haddii amarkaagu yahay koob aan khamro lahayn oo aad saacado u dhiganaysid ... Sidoo kale, in qalalan - "loo jiido", halkaas oo shef-virtuoso dhowr ilbiriqsi buuxin doonaa amarkaaga. "Laba xabo leh, hal qajaar leh?" - iyo tuurista taarikada cajalad ku duuban, iyada oo la sii wadayo wada sheekeysiga saaxiibtinimo ee lala yeesho booqdayaasha joogtada ah isla markaana raadinaya hal ilbiriqsi oo TV ah, halkaasoo laga sii daayo TV-ga, halkaasoo laga bilaabi karo tartanka. Sababta qaar, dhammaan qalabixiyayaashu waa taageerayaasha adag ee tartanka faraska. Si aad u dhaqdo wax kasta oo soo socota, dabcan, shaaha cagaaran, kaas oo dhammaan kuwa la qalajiyey aad cabi karto inta aad rabto bilaash, badi naftaada ku karkaraya biyaha karkariyaha gaarka ah. Jaartarka si aad ugu socotid waddooyinka Tokyo, waxaad bedeli kartaa cabsida, ugu yaraan kaliya inaad ka fiirsato nadiifinta nadiifinta ee kuraasta caagga ah ee lagu daboolay iyo madaxyada iyo gacmo gashi-caddaan ah oo darawalka ah. Si kastaba ha noqotee, raaxo la'aan ma keeni karto gaadiidka dadweynaha. Xitaa saacad degdeg ah, marka khadadka dhan ee rakaabku ay ku xiran yihiin basaska, ma aha in ay ka walwalaan in qofna uusan haysan meel ku filan - inkasta oo dhammaantood la dhigo meel la yaab leh. Waxaa laga yaabaa in laga yaabo in qofna uusan ku dhicin inuu ku dhufto baska marka hore oo qof walbana sugaa inuu sugo kuwa horay u sii gudbaya? Gaadiidka ayaa si gaar ah u jecel in uu eego albaabbada caagga ah ee ka soocaya mashiinka ka soo jiidaya cagaha, kuwaas oo furan oo kaliya marka tareenku yimaado. Tokyo Metro waxaa laga yaabaa inay tahay midka kaliya ee adduunka ah halkaasoo hawadu ay shaqeyneyso xilliga jiilaalka iyo xagaaga, sidaas darteed si aad u qabsato qabow xagaaga!
Gaadiidka dadwaynaha, waa mid aad u haboon in lagu tago Makka oo ah dhalinyaro Japanese japanese ah - degmada Shibuya, taas oo sidoo kale cajiib ah maxaa yeelay waxaa jira macno ahaan labadii mitir mitir kasta oo lagu rakibay qalabka casriga ah. Marka laga tago degmada dhalinyarada, Shibu waa qeylo iyo madadaalo. Sidaa daraadeed, si aan u lumin oo aan lumin layskoo dhicin dadka kale, waxaa wanaagsan inaad horay u sii wadatid si aad ula kulanto meel u dhow taariikhi ah oo lagu dhisay hareeraha eeyga goonida ah ee Hachiko, oo maalin kasta u tagay si ay ula kulanto martigeeda jecel ee saldhigga iyo xitaa geeridiisa kadib, aan aqbalin lumitaanka, diiday inuu ka tago boostada caadiga ah. Si aad u soo qaadato Shibuya oo kaliya iyo dhalinyarada ku nool yaryar ee deegaanka waa madadaalo lafteeda, sababtoo ah waxaa jira wax la arko - Shibuya, "gabdhaha orange" caadiyan soo uruuriya, qayb gaar ah oo ka mid ah dhalinyarada jimicsiga ee caasimadda Japan. Jabbaan, kuwa raacsan habdhaqankan waxa loo yaqaan "ganguro" (tarjumaadda suugaanta - wajiyo madow). Sida iyo marka dhaqdhaqaaqa xeegada ah, oo aan lahayn wax isku mid ah oo adduunka ka jira, ayaa kacday, taageerayaasha habdhaqankan cajiibka ahi waxay ku adagtahay in ay ka jawaabaan. Waxaa suurtagal ah in xididada isbedelka moodada caanka ah ay ka yimaadaan muusikada Japan, oo geesiyaal ah kuwaas oo ku kala duwan indhaha iyo muuqaalka jilicsan, sida Bambi. "Gabdhaha Orange-ka" waxay si firfircoon u isticmaalaan isku-kalsoonida, helitaanka maqaarka maqaarka ee la doonayo, iyagoo ku socda mashaariicda maskax-furan, xiran dharka qaladka ah iyo qurxinta dharka quruxda badan iyo dharka midabka leh. Laga soo bilaabo Shibuya, waxaad si fudud u gaari kartaa Omotesando, waddooyinka qaaliga ah, oo inta badan loogu yeero Tokyo "Champs Elysees", iyo degmo kale, Harajuku. Halka, jidka, Axadda waxaa jiraya fursad ka baxsan "gabdhaha oraanlaha" si ay ula kulmaan "Gothic Lolit". Kuwii labaadna way ka duwan yihiin kuwa ugu horreeya ee ay wajahaan wejigooda iyo dhumucooda indhahooda, laakiin waxay dhar gashan yihiin qurxiyo iyo jilicsanaan, inta badan midabada cad iyo madow, gaar ahaan doorbidaya dhar gashan dharka gabdhaha leh. Calaamadaha ugu caansan ee accessories waa "Lolit" - ka gudbaan, hunqadaha iyo fawaakihda, iyo alaabta aad jeceshahay waa midab qaadid, sidoo kale ku labisan madow. "Lolita" iyo "gabdhaha orangaalka" ayaa si xoogan u daalinaya dalxiisayaasha iyo, guud ahaan, wax badan oo ay sameeyaan, kaliya ayagoo kaashanaya waxay abuurayaan jawi dabiici ah oo khatarta ah aagga.
Waxaa la yaab leh in dadka intiisa kale ee deggan Tokyo aysan ahayn in lagu eedeeyo musqulo xad-dhaaf ah ama soo jiidasho leh. Waxay yihiin kuwo aad u qurxoon, asalka iyo caqliga, laakiin waxaa jira iyaga lafo gaar ah, oo ku qasbaya qaar badan oo reer Yurub iyo Maraykanka inay si joogto ah u raadsadaan aroosadda Japan. Caan ka mid ah dharka noocan oo kale ah - dhar leh oo leh qoraallo ku qoran Japanese: "Anigu waxaan raadinayaa jaceyl Japan ah." Tusaalooyinka soo noqnoqda, marka haweenka Yurub ama Maraykanku ay guursadaan Jabaan, ma aha wax badan, laakiin guurka noocaas ahi maaha mid aan caadi ahayn. Maxaa jiidanaya ajaanibta ajnabiga ah ee gabdhaha Japan? Muuqaal, maskaxda qaddarinta ama muraayadaha casriga ah? Inta badan, marwalba, inkastoo halyeeyada ku saabsan soo dhaweynta haweenka Japan, sidoo kale, waxay u badan tahay inay door ka ciyaaraan. Waxaan xasuustaa shil ahaan marka la eego goobta jimicsiga, markii jilicsanaantii Japanese "gerlfrend" ee ciriiri raacay amiirkii shisheeye ee ka soo jeeda simulator si uu u siman yahay, taabashada wajigiisa ka dib markii uu taabtay jimicsi kasta. "Ciyaartu", sida muuqata, waxay ku jirtey jannada toddobaad ee farxad leh oo cidna uma aragto, marka laga reebo saaxiibteeda daryeesha. Laga yaabee tani waa qarsoodi? Si kastaba ha noqotee, dhowr sano ka dib arooska, sida idyll sida wanaagsan u siin kartaa habka nolosha. Australiyaan ah oo la yaqaan ayaa ka careysnaa in laba sano ka dib markii arooska xaaskiisa ee boodhka ah ee boodhka ah uu isaga bakhtiiyay oo uusan u oggolaan inuu u tago inuu shaqeeyo, iyada oo aan shakhsi ahaan ugu soo qaadin qadadiisa sanduuq. Marka ugu horeysa ee ay go'aansatay in ay dhisato xirfad, cunnooyinka maalinlaha ah waa wax ka mid ah kuwa la soo dhaafay, oo hadda waa inuu u kaco sidii hore si uu u kariyo quraacdiisa iyo xaaskiisa.
Waa hagaag, inaad barato lamaanaha mustaqbalka ee jinsiyadaha kala duwan, dabcan, jawiga nasashada ee naadiyada habeenkii iyo discos, ugu caansan oo ku yaala Roppongi, waa waddo caan ah oo leh ajaanib iyo jarmal. Haddii qof uusan aaminsaneyn in jarmalka uu yaqaano sida loo helo madadaalo ahaan ka hor inta uusan dhicin, soo dhawee Roppongi - waddadan marna ma seexan. Waxa kaliya oo ay tahay in la qiyaaso sida iyo goorta habkan loo nadiifin karo. Ku saabsan Roppongi sida caadiga ah ku qoran buug hagid ah mid ka mid ah meelaha ugu nabadgelyada badan ee caasimada Japan, laakiin, nasiib daro, khatarta oo dhan waxay u egtahay hoos u dhaca qulqulka sigaarka iyo xatooyada yaryar.
Roppongi wakhti kasta oo muuqaal qurux badan leh ee Tower TV-ga Tokyo, taas oo ah, si kastaba ha ahaatee, waxaa laga arki karaa meel kasta oo caasimadda Japan ah, taas oo ka dhigaysa hage fiican oo ka soo horjeeda madax-bannaanida Tokyo. Waxa suurtagal ah in halkan laga lumo, dabcan, laakiin maaha mid cabsi badan: xataa xitaa Jarmalka, oo aan si fiican ugu hadlin Ingiriisiga, waxay weli isku dayi doonaan inay u noqdaan dalxiiskii ugu da'da yaraa jihada saxda ah. Xilligaas, si ay ula xiriiraan dadka maxalliga ah, muhiim ma aha ajaanibta in ay xaalado ba'an ku galaan: Japanese badan, gaar ahaan dugsiyada dhigta, sida loo isticmaalo aqoonta lagu barto koorsooyinka luuqada iyo geesinimada u jeedad kasta oo "gaijin", taas oo ah ajnabi, Ingiriisi, si ula kac ah u tixgeliyaan dhammaan "Americans". Tani waxay ixtiraameysaa buug-gacmeedyada khatarta ah. Luqad-yaqaanno luuqado ah ayaa sugaya dhibbanaha aan la garanayn meel u dhow suugaanta ajnabiga ah iyo dabbaaldegga ku sameeya khudbada aad ku hadashid Ingiriisiga. Waxa kaliya oo lagama maarmaan ah in la bixiyo jawaab togan, sida soo socota soo jeedinta nasiibka ee halkan iyo hadda bilawday in ay la xiriirto - ujeedada dhaqanka luqadda ee "weerarka". Ajaanibta waxaa lagu badbaadiyaa xaalad noocaan ah inta badan duulimaadka - ma aha in qof kastaa uu jecel yahay hababka isgaarsiinta. Si kastaba ha ahaatee, kuwani ma aha kiisas caadi ah, sababtoo ah inta badan Japanese waxay u fiicantahay dadka ajnabiga ah, laakiin aan waxba galabsan. Isku mid ahaan sida Tokyo. Ka dib oo dhan, magaalada kaliya waxay bixisaa si aad u barato naftaada u dhow, laakiin marnaba kuma soo rogin xoog. Sidaa daraadeed, waxay ka kooban tahay meel ay asal ahaan ka soo jeedaan asal ahaan waaweyn iyo kuwa qallafsan ee adag-midkoodna midna midna kama soo bixin doono dadka, qofna kuma tilmaami doono farta. Waxaa jira fursad aad naftaada dareentid, qof kasta oo aad tahay. Sababtaas awgeed waa halkan inaad dareentid "adiga", xitaa haddii aad tahay gaijin (ajnabiye) oo kaliya dayuurad ka tagtay shalay. Haa, waa qeylo, oo gaaban oo mararka qaarkood aan la fahmi karin, laakiin haddii aad diyaar u tahay inaad la xiriirto magaaladan, waxaad hubaal noqon doontaa mid diiran oo raaxo leh. Dhammaan, Tokyo, qof kastaa wuxuu heli karaa wax "hooyo" iyo iyaga u gaar ah, ugu muhiimsan - inuu awoodo inuu dhagaysto, eego oo sugo ...
Saunada, qubeyska, duugista masjidka Moscow
Hambalyo qurux badan oo qosol leh maalin kasta Tatyana iyo aayadda
Noofambar 2016 - goorta iyo sida loo dabaaldego Christmas-ka Ruushka
Sidee ayaad iskaga nasan kartaa Spain adiga keligaa
Sida loo nasto bisha Maarso 8, 2016: Maalinta haweenka laga bilaabo bilowga waqtigeena
Filimooyinka ugu fiican ee ku saabsan Christmas-ka. Maxaa laga arki karaa fasaxyada sannadka cusub?
Sida loo abuuro isku-qabsashada gurigaaga
Xagee loo tagaa Sebtembar?
Maxay dadku daalka u helayaan?
Kaararka boostada Febraayo 23, 2018 qoraallo iyo hambalyo
Dalxiiska waa nooca dhaqdhaqaaqa
Talooyin iyo talooyin ku saabsan hooyooyinka da'da yar
Sida loola dhaqmo koox si ay u noqoto mid guul leh
Guryaha ugu waxtar badan
Sida loo doorto qalajiyaha timaha wanaagsan
Cuntooyinka ugu caansan iyo wax ku oolka ah
Qabowga carruurta: sida loo daaweeyo
Maxay tahay sababta aan u lumiyo miisaan sabab la'aan?
Markaad rabto waxyaabo "tan": sida loo sameeyo cusbo cusbo oo jiilaalka ah
Maraq lentil leh isbinaajka
Goorma ayuu jinsiga suurtagal noqon karaa marka uu dhasho?
Sidee loo qaataa dhalashada dhalashadiisa?